त्रास | कृष्ण बजगाईं
लघुकथा कृष्ण बजगाईं June 21, 2009, 1:24 pm
मन्त्रीज्यू तपाईको मन्त्रालयको त्यो हाकिमले तपाईंको उपहास गरे जस्तो लाग्दछ। त्यस कार्यालयमा तपाईको तोक आदेशले नै नियुक्ति लिएर गएको । न टेवल छ, न बस्ने कुर्सी छ न त कामनै दिन्छ। एकचोटी थर्काउनु पर्यो त्यसलाई।
टेवल कुर्सी मात्रै भएर के गर्नु? पार्टीका साथीहरु गफ गर्न आउँदा अप्ठ्यारो भो। गोपनियता केही रहेन। मन्त्रीज्यू , एउटा अलग्गै कोठा र टेलिफोन दिनु भनेर भनिदिनु पर्यो त्यस हाकिमलाई।
कोठा र टेलिफोन मात्रै भएर नहुँदो रहेछ। पार्टीका सामान्यस्तरका कार्यकर्ता र समर्थक सिधै मेरो कोठामा आईपुग्छन्। पार्टी भित्रको गोपनियता नै रहेन। हाकिमलाई भनेर पि.ए.को व्यवस्था गरिदिनु पर्यो मन्त्रीज्यू।
पि.ए. सहितको कोठा त पाईयो तर अधिकार केही चुहाउँदैन। न त कुनै कागज पत्रमा तोक आदेश नै लगाउन पाईन्छ। यस्तै हो भने त्यही पि.ए. ले पनि हेप्छ मलाई। लौन हाकिमलाई भनेर अधिकार अलिकति बाँडफाँड गर्नु पर्यो भनेर भनिदिनु पर्यो मन्त्रीज्यू।
बल्ल बल्ल अलिकति अधिकार त पाईयो तर खास केही गर्न सकिएन। त्यसले हाम्रो सिंगो पार्टी मात्र होईन हजुरलाई पनि बदनाम गराएर असफल बनाउन षड्यन्त्र गरिरहेको छ। म त्यसको ठाउँमा पुगे भने हजुर पनि मालामाल, पार्टी पनि मालामाल।
त्यसको केही दिनमा ऊ कार्यालयको हाकिम भयो।
त्यसपछि आफूले गरेको निर्णयमा पछुताउँदै मन्त्रीजीलाई चिन्ता भयो –“कतै कुनै दिन मेरै क्षेत्रबाट चुनाव त लड्दैन त्यसले ।”